Fanaanka weyn Keynaan oo ka hadley waxqabadkiisa arimaha Abaaraha (Sawiro) – SBC
Fanaanka weyn Keynaan oo ka hadley waxqabadkiisa arimaha Abaaraha (Sawiro)
Fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Keynaan Cabdi Warsame oo maanta socdaal ku tagey magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa sheegay in uu ku wajahan yahay safarkiisa arimaha abaaraha ka taagan Soomaaliya ee saameeyey boqolaal kun ee qof.
Keynaan oo ay ku wehliyeen safarkiisa fanaaniin u dhashay wadanka Canada ayaa booqdey Isbitaalka Banadir ee magaalada Muqdisho waxaana uu sheegay in uu dhawaan qaban doobo bandhig faneed dhaqaalaha ka soo xarooda uu ku caawin doono dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameynta nolasha ah ku yeesheen.
Fanaanku wuxuu sheegay in sidoo kale uu doonayo in uu indhaha beesha caalamka ku soo jeediyo abaaraha & xaaladaha bini’aadamtinimo ee ka jira Soomaaliya.
Warka ayaa intaasi ku daraya in Fanaan Keynaan Cabdi Warsame & xubnihii la socdey ay isla maanta ka ambabaxeen magaalada Muqdisho.
Socdaalka Fanaan Keynaan Cabdi Warsame ayaa noqonaya mid dareen wadanimo ka muuqato waxaana la is waydiinayaa fanaaniintii waa weynd ee Soomaaliya oo habeen caasimadaha Yurub & Waqooyiga Ameerika ku qabana bandhig faneed dhaqaale ururis ah sida ay uga damqan waayeen xaaladan ba’an ee ka taagan dalka ee ay u dhimanayaan caruur Soomaaliyeed.
Link hoose ka dhageyso wareysi Idaacada BBC-da la yeelatey Keynaan Cabdi Warsame socdaalkiisa ku aadan magaalada Muqdisho.